Kulabo izivakashi abathanda zokungcebeleka kolwandle dream uphumule eholidini kusukela umsindo amadolobha kanye nezinkinga zansuku zonke, indawo ophelele angaba yikho isiqhingi exotic Hon Tam eVietnam. Sekuyisikhathi eside bakhangwa nokuzola abantu nezindawo emangalisayo. Kulesi sihloko sifuna ukukhuluma mayelana kwelinye lamahhotela resort - Merperle Hon Tam kuyona.
izivakashi Vietnam waziwa ezivela emhlabeni wonke njengoba indawo yokuphumula kwesabelomali. Nokho, ngaphandle nje ezwekazini zokungcebeleka, ezweni elinothile eziqhingini ezingavamile, eyakha amahhotela eminingi ukunikela ukuphumula ku "enethemba lokuthola" nesitayela. Enye yalezi zindawo iyisiqhingi Hon Tam, etholakala eduze ngokwanele ukuba resort odumile Nha Trang.
Merperle Hon Tam Resort - Indawo abantu kuyihhotela esincane esisogwini ogwini. Lesi sakhiwo sinamagumbi Bungalows, okuyinto sizungezwe engadini green. Yakhiwa ngo-2008 futhi sihlanganisa 49 amakamelo.
Ibanga kusuka esikhumulweni sezindiza kulesi siqhingi emgceni locondzile ingamakhilomitha angu-20. Ihhotela kuyobenza kulabo izivakashi abakhetha iholidi ethule ngasolwandle kude umsindo befuna. Naphezu kweqiniso lokuthi eyinkimbinkimbi itholakala esiqhingini, budebuduze ke kukhona izinto ezithakazelisayo kakhulu Nha Trang, iphuzu esizoxoxa ngalo kamuva.
Merperle Hon Tam kuyona linikeza izivakashi zayo yokuhlala kumagumbi ise Bungalows. Zonke amafulethi babe balcony noma masimu. Kukhona amakamelo izigaba ezilandelayo phakathi kwabo:
Deluxe Bungalow - Bungalow Deluxe double (endaweni 52 m.). Amafulethi anemisila iziteshi satellite TV flat screen, isiqandisi, ephephile, zokungena internet, umlandeli, air conditioning, minibar, ephephile, zokugeza, ayina setha zangaphansi.
Deluxe Bungalow imibhede olulodwa ezimbili. izinombolo ezinjalo musa kuhluke ukumisa kusukela odlule isigaba amakamelo.
Suite Family - suite umndeni (64 m endaweni sikwele.). Uma izigaba ezimbili zokuqala amakamelo angazamukela kufike abantu ababili kule Suites umndeni angazamukela ezintathu isivakashi. Kulezi amafulethi isici enye inkosi-usayizi embhedeni futhi noyedwa. Ezinye izindaba zika-Igumbi imishini alihlukile.
Amawindi kuzo zonke zokuhlala ezibheke ulwandle, ngoba Bungalows avuliwe "ubuso" ogwini. Cottages zakhelwe ochungechungeni eziningana, omakhelwane abaningi cishe ogwini, lonke - engadini. Ngakho izivakashi abakghona ukukhetha indawo efanele.
kuyinzuzo ngokwengeziwe ezinganeni
Merperle Hon Tam kuyona inikeza eziningana izinzuzo izivakashi omncane engenathi:
Ngo iliphi igumbi angazamukela ezingeqi kwezingu izingane ezimbili, ogama yobudala ingeqi engu-12.
Izingane abangakabi nanhlanu ubudala, ungahlala mahhala, inqobo nje uma ngeke unikelwe embhedeni ehlukile.
On the ukufika ngesikhathi edeskini reception eyenzelwe izingane ezineminyaka engu isukela eminyakeni emihlanu kuya kwabayishumi nambili ubudala basolwa ngesidlo sasekuseni (lokhu kwenziwa ngqo kusayithi, kunokuba uma yokubhuka).
Izingane ezingaphezu kuka-12 eminyakeni ezibhekwa abadala, futhi ngenxa ikamelo lazo isiyenezelwe ikhokhwe ngokugcwele.
Endabeni isidingo imibhede ezengeziwe kukhokhelwe reception. Izindleko isevisi kuncike kusigaba esithi efulethini.
Merperle Hon Tam kuyona 5 * linikeza ukudla ayinhloko futhi restaurant yakhe kuphela. ibhulakufesi kuphela emananini. Nokho, uma ufisa, ungahlela ibhodi esigcwele ku ukufika. Esikhathini ukudla ekuseni wakhonza njengephayona lezitsha. Ezinye izindaba zika-isikhathi kungenziwa yayala à la Carte. Uma wayefisa, ekuseni wakho kungaletha ekamelweni, kanye nezimali lokuthumela kungabikho muntu okwamuka.
opharetha amaningi anika Christmas izinkambo e Merperle Xon Tam kuyona 5 *. I engavamile kulezi uhambo ukuthi ebusika obubanda ufika sezulu ngokumangalisayo efudumele ogwini olwandle. Ngo-Eva kaNcibijane, ihhotela uhlela idili, izindleko okuyinto emananini semvume. Ngenxa yalesi sizathu, Christmas Tours eqolo ngaphezu kwanoma abavamile. Ngokuvamile, uma uthatha lolu hambo athandwa kakhulu phakathi izivakashi zethu.
Merperle Hon Tam kuyona (Vietnam) has a endaweni enhle kakhulu futhi landscaped, okuyinto lukhula izihlahla eziningi exotic sezihlahla. Ngaphezu kwalokho, kukhona i Kusaphazwa ukuqhakaza yezimbali eduze amathrekhi. Omunye angabona ukuthi abasebenzi ehhotela uqaphe ngokucophelela lapho zibona ukuhlanzeka nokuhleleka oda, ungakhohlwa nokunakekela izitshalo. Insimu is kahle emisiwe, ukuthi amnandi ukuhamba emthunzini izitshalo ezishisayo.
Isakhiwo ine echibi elikhulu kakhulu okuyinto wahlukaniswa ngamaqembu amagatsha ahlukene ekujuleni ezahlukene. Kukhona umnyango yezingane. Ichibi sibekwe ehlotshiswe uhlaza, ihlanganisa ngokuvumelanayo ku ukwakheka jikelele.
Ihhotela Merperle Xon Tam kuyona (Vietnam), isipho esitolo, ithenisi enkantolo spa. Ngokusho isayithi, ungakwazi ukuhamba phezu tuk-tuk uma ungafuni ukuhamba. Nokho, endleleni ukuphendukela kunoma iluphi uhlangothi ingeqi kwamamitha angu-200.
Naphezu kweqiniso lokuthi leli hhotela esiqhingini, izivakashi banethuba ukuya Nha Trang bethenga noma ukuhamba. Bot ithunyelwa ogwini ihora ngalinye, ngakho ezokuthutha akunankinga.
On-site, izivakashi ungadlala pool, futhi izingane - imidlalo Igumbi.
Merperle Hon Tam kuyona 5 * (Vietnam) itholakala ogwini. Ngakho-ke, inzuzo enkulu ye hhotela yokuthi une ngamaholide kukhona phezu kolwandle futhi bahlonipha ubuhle bayo. lolwandle Big futhi ububanzi ifakwe izinhlobo eziningi sunbeds ezahlukene. Ogwini wabo kakhulu, ukuthi noma ngasiphi isikhathi ungathola indawo khulula. Ibhishi amathawula ayatholakala ngesikhathi edeskini reception eziningi angenamkhawulo.
Merperle Hon Tam kuyona (Vietnam): Izibuyekezo mayelana ehhotela indawo
Ekhuluma siqhingi ukuba kuhle ngokumangalisayo Hon Tam kanye nehhotela, Ngifuna ukukhalaza kuzivakashi zezivakashi abaye bavakashela khona ukuba umqondo enengqondo ngale ndawo. Merperle Hon Tam kuyona 5 * (Vietnam) yakhiwe ogwini. Ihhotela zizokhanga izivakashi abangamalungu nabasekeli ukuzilibazisa ongaphandle, njengoba kulo lonke amaholide wena uyobe ephakathi izitshalo exotic olwandle. Nethezeka ku Hon Tam wehlukile ngokuhlala efanayo Nha Trang. Lezi izindawo zokungcebeleka ezimbili abasakwazi ngokungafani nomunye, nakuba zinezikhwepha iseduze. Uma Nha Trang - kule ndawo yeholide ezisemadolobheni, uMhlonishwa Tam - bemvelo ukuba kuhle ngokumangalisayo nge amabhishi ahlanzekile namanzi.
Ngesikhathi esifanayo, ngokuba esiqhingini, zivakashi ancamuka kusukela impucuko futhi ayikwazanga nganoma yisiphi isikhathi ukuze bawele oya ezwekazini. Ngo Merperle Xon Tam kuyona 5 * (Nha Trang) ukuphumula kahle nezingane ngoba ulwandle liseduze kakhulu.
Uphenyo isibalo amakamelo
Ihhotela Merperle Hon Tam kuyona inikeza yokuhlala e kumavila Bungalows, elakhiwa ngo isitayela yendabuko ejwayelekile. Ngokwe-izivakashi, the Villas amasha, futhi amakamelo ibe banzi ngaphandle Bungalow. Kuleli qophelo, kuyafaneleka ukunaka lapho ukhetha yokuhlala, kusukela opharetha ukuvakasha musa ucacise lezi umehluko wemisindo nemiqondo yamagama. Ingaphakathi amakamelo nazo eyenziwe isitayela Thai.
Zonke amafulethi babe cishe isembozo efanayo, futhi kuhluke kuphela ngobukhulu kanye nebanga kusukela ogwini. abahambi abanolwazi musa batusa ngokukhetha Bungalow eduze lolwandle. Abantu abaningi bakhetha ufakwe kubo, enethemba lokuthi iholidi onokuthula okuphumuzayo. Futhi kuvela okuphambene nalokho kuyiqiniso ngoba izincwadi kule ndawo labetibambile ekuseni zonke izisebenzi nezivakashi ngosuku olulodwa amaShayina. Ukuze uthole okuphumuzayo kakhudlwana ukuhlala kufanelekile phansi izindlu engadini.
Ngokwe-izivakashi, amakamelo abadinga ukulungiswa fresh yezimonyo, kodwa ngokuvamile, isimo sabo akusho akusibekele lonke. Ihhotela ihlinzeka nsuku zonke service yokuhlanza. Kodwa eqinisweni, uma ufuna efulethini yakho ukuba zihlanzwe, kuyafaneleka ukukhumbula intombazana. Abasebenzi eshintsha amathawula nsuku zonke futhi amashidi - kanye ngesonto. Nsuku zonke egumbini nezincekukazi ushiye ibhodlela lamanzi isivakashi ngasinye, kodwa lokhu inani lamanzi akwanele usuku lonke, ngakho izivakashi ukuthenga ngaphezulu wakhe e Nha Trang.
Merperle Hon Tam kuyona 5 * (Vietnam, Nha Trang) inikeza izivakashi zalo bebayokudla yokudlela esizeni. Njengomthetho, izinga ukudla ezihlukahlukene ukudla kubangela eziningi mpikiswano phakathi izivakashi. Ngalo mqondo, Merperle Hon Tam kuyona 5 * (Nha Trang) kwaba okufanayo. Ububanzi lezitsha izitsha ekuseni alanele ukuze ubonise bonke abavakashi. izivakashi abaningi bathi ukukhetha okuncane ukudla. Ingabe kuyiqiniso, kunzima ukuba yahlulele, ngoba imicabango yabantu ngalolu daba ziziphilela eziphikisa.
Ezinye izindaba zika-sikhathi, izivakashi nethuba oda à la Carte yokudlela imenyu. Ngeshwa, amaholide bathi kunzima ukunquma akhetha ukukudla, + njengasosukwini lokungivivinya intengo akukho ukuhumusha Russian. Izivakashi empeleni wenze oda okungahleliwe. abasebenzi yokudlela ekuletheni ukudla ukhululekile ekamelweni, iyisevisi elula kakhulu uma ungafuni ukushiya efulethini.
Isici yonke indawo kulesi siqhingi wukuthi akukho ukukhetha okunjalo enkulu amathilomu nezindawo zokudlela e Nha Trang. Ngakho-ke kufanele udle kuphela ehhotela. Uma ufuna ukuthenga ukudla, khona-ke kumelwe uhambe oya ezwekazini kuya esuphamakethe.
Uma uhlela ukuya eholidini eVietnam ehhotela Merperle Hon Tam kuyona kungenzeka kukho okuhle ngokuba ukuphumula esekusithekeni ngasolwandle. indawo Good, nezindawo ezinhle namabhishi engapheli - ikhadi ngokuvakashela eyinkimbinkimbi. Ihhotela kwenza ejabulisayo, njengoba kufakazelwa Izibuyekezo eziningi ezinhle. I ethile kuphela, okuhlale kubhekiswe ku amaholide kuyinto inani Amazing of Chinese. izivakashi Daily kusuka China alethwe esiqhingini by iholidi wosuku olulodwa. Ngezinye izikhathi beziphatha ngempela ezinomsindo, futhi lokhu kubangela izivakashi ukunganeliseki Merperle Hon Tam kuyona 5 *, lapho ubukeza - ubufakazi. Nakuba-ke Kuyaphawuleka ukuthi izivakashi Chinese ebhishi ozinikele.
Ezinye izindaba zika-ukuhlala zezivakashi esiqhingini engonakalisiwe. abahambi abanolwazi ngokuqinisekile ukuncoma ukuvakashelwa ehlukahlukene ezokungcebeleka hambo. Thenga kubo kangcono kunoma iyiphi inhlangano Nha Trang, kusukela izindleko izinkambo ngaphezu ehhotela. Uhambo ukubandakanya ukuhamba ekuseni kakhulu kulesi siqhingi, kodwa isikebhe ngesikhathi kodwa ukuya khona. Nokho, leli phuzu kalula ixazululwe ngabasebenzi bakwa-reception. Zinikeza isikebhe sabo bonke izivakashi ukuhamba ogwini.
Ngokukhethekile ikhokhelwa kuze izinga lenkonzo kungafiseleka e Merperle Hon Tam kuyona. Izibuyekezo zichichima ukubonga nenhlonipho intombazane abakhuluma isiRashiya okuthiwa Albina abasebenza reception izindawo. Ngokwe-izivakashi, yena ebusweni ihhotela kwezivakashi isiRashiya, ngoba kusiza ukuxazulula zonke izinkinga, eziqala komnikazi ziphethe uhambo indawo. Ukuze kungafinyelelwa kunoma iyiphi inkinga, futhi alusoze lwaphela nanini kuwe. Kungakhathaliseki ukuthi kuhle kangakanani ulwazi lwesiNgisi, kunzima kakhulu ukuyiqonda inkulumo sabantu lwendawo ngendlela eqinile. Ngakho-ke, ukuba khona lesiNgisi omele ungukuphila lula kakhulu izivakashi.
Kukho konke, ihhotela bonke abasebenzi friendly futhi nabanomusa, kodwa oyedwa nje uye wathola Izibuyekezo eminingi emihle.
Izibuyekezo ebhishi iholide
Uma uke waphumula ngalolu resort njengoba Nha Trang, Merperle Hon Tam kuyona ngeke wesilisa ikumangaze nge endaweni emangalisayo futhi isondele eduze nogu. City amahhotela Nha Trang, bavame ukuba endaweni encane, futhi ngaso sonke isikhathi ngasolwandle. Umsindo befuna - nabangane kwaphakade edolobheni. Into - iholide esiqhingini Hon Tam. Lapha, izungezwe ulwandle kanye nemvelo, ungakhululeka kusukela izinkinga futhi ugxumela ukucatshangelwa esingenzi lutho indawo ekhexisayo.
amabhishi Endless sandy lesi siqhingi ihlanzeke kakhulu kunalokhu kulelivekati. Ikakhulukazi ukuthi abasebenzi ehhotela bahlanza-ke nsuku zonke. Inzuzo ezibalulekile lesi siqhingi ukungabakhathaleli nhlobo amagagasi. Lapha, kolwandle uhlale ezolile futhi ihlanzekile, kodwa ngoba ungakwazi ukubhukuda nganoma yisiphi isikhathi. Ikakhulukazi, kulula ukuya eholidini nezingane. Naphezu kwesibalo zezivakashi ngokuhlala ehhotela, ebhishi njalo malolyuden, kungani ukuhlala kuso ukhululekile futhi kumnandi.
Uma ukhetha ehhotela Merperle Hon Tam kuyona e Nha Trang, wena ungagxambukeli zangaphambi bajwayelane resort. Hon Tam Isiqhingi itholakala amakhilomitha 4 nje ukusuka ogwini. Ukuze uthole lapha kulula, njengoba nsuku zonke Shuttle izikebhe ukuze ngokuqinile ukuba alalele schedule. Esiqhingini izimo best for sizipholele ogwini olunesihlabathi esimhlophe. izivakashi eziningi, amaholide e Nha Trang, beze lapha diving.
Naphezu kweqiniso lokuthi lonke isiqhingi inikeza ukuzola, ngisho lapha, izivakashi ungathola ukuzijabulisa efanelekayo. It unikeza - Awe-Parasailing futhi paragliding, lo entsha kakhulu Ungazama ngesandla sabo e-intaba ekhuphuka, kanye windsurfing, diving, ukugibela isithuthuthu noma ski.
Hlukanisa iholide kwakho ehhotela, ungavakashela indawo yobuhlanga. Ukuvakashela kwakhe kuzovumela ukuba bajwayelane ngamasiko abantu. Leli dolobhana ukusungulwa ngokuhambisana ngokugcwele siko, banamathela bendawo ekwakhiweni emizini yabo. Lapha ungabona izakhi kwezimpahla yasendlini, izingubo zokugqoka kanye zomculo. Eduze nedolobhana zikhona izitolo eziningi ukunikela izivakashi bendabuko Vietnamese ukuthenga izinto eziyizikhumbuzo.
Nokho, beshiya isiminyaminya nesiphithiphithi sasemadolobheni abanolwazi belulekwa ukuba abe nomkhawulo libukwe kuphela emzaneni engiyalela ukuya ezwekazini ukuze bakwazi ukubona izindawo ezithakazelisayo eziningi the resort.
Ukukhangwa eyinhloko Nha Trang kubhekwe njengento Po Nagar umbhoshongo. amathempeli Buddhist kahle walondoloza kuze kube yilolu suku, naphezu kweqiniso lokuthi miningi kunesihlabathi iminyaka eyinkulungwane. Uma umbhoshongo wawuyingxenye ithempeli eziyinkimbinkimbi esikhulu, elakhiwa ngo 7-12 eminyaka AD. e. bhunga Vietnamese kule ndawo amandla akhethekile ezingokomoya. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi kukhona Kwenziwa emikhosini Buddhist kanye namanye amasiko.
Izivakashi eziningi beze Nha Trang kungukuthi nje ufuna iholidi beach, kodwa nezalo yokutakula. Ngo emaphethelweni resort iyona edume udaka zokugeza Thap Ba. Inombolo yomhlaba wonke yesikhungo Wellness kuyinto ngokumangalisayo ngezizathu ezinhle, egcwele izimbali kanye izimila tropical. Lapha, izivakashi ungakwazi shí emanzini umthombo amaminerali, zibhukuda amachibi, cwilisa in ephulukisa udaka nokugeza. Phela ukwelashwa, izivakashi ungakwazi ukujabulela izitsha okumnandi ukudla okuhlukahlukene European kanye Vietnamese. Inombolo yomhlaba wonke yesikhungo umsebenzi amabhentshi, lapho ungakwazi ukuthenga hhayi eziyisikhumbuzo kuphela, kodwa futhi enenhlabathi futhi wenze-up ukukhiqizwa lendawo.
Ethandwa kakhulu phakathi izivakashi iyona ipaki "Vinpearl", etholakala kulesi siqhingi Hon Che. Huge izivakashi eziyinkimbinkimbi kuhlanganisa inethiwekhi amahhotela, izindawo zokudla, zezitolo, Spas kanye zonke izinhlobo zokuzijabulisa. "Vinpearl" - enkulu futhi engcono ukuzijabulisa isikhungo eVietnam, analogs ukuthi ayisekho kuleli zwe. Izivakashi ngokuvakashela isiqhingi, inikeza zonke izinhlobo zokuzijabulisa. Nsimu enkulu yalesi siqiwu wahlukaniswa ngamaqembu amagatsha. Kukhona epaki amanzi, nenkundla yemidlalo yaseshashalazini, yezitolo, ipaki, inkundla yokudlala nokuningi. Ngaphezu kwalokho, izivakashi ungavakashela esiqhingini zokubukela eziningana, Karaoke, ugibele zezingane.
Enye yezindawo ezithakazelisa kakhulu resort kubhekwe njengento Monkey Island, elise amakhilomitha 20 kusukela Nha Trang. Okwamanje, iyikhaya 1500 izimfene. Bheka lezi zilwane cute kuyoba interesting nje kuphela izingane kodwa futhi abadala.
Ihlangano yokuNgeza Oceanography - lokhu ingenye yalezi zindawo ukuthi kuwufanele ukukhombisa izingane. Ngaphansi isikhungo ophahleni okwamanje akusiyo kuphela oceanographic ucwaningo centre, kodwa futhi aquarium enkulu futhi lwamathambo enkulu imikhomo. Isikhungo waqala umsebenzi ngo-1922, ngesikhathi imisebenzi yakhe kutsi kwehlwaywe we South China Sea nezinye ezilwandle nakuzo izilwandle bahlangana iqoqo elikhulu zobuciko, okuyinto yaba isisekelo sezinguqulo ukudalwa aquarium. Emuva ngo-2005, maphakathi ucwaningo wathola isimo ezikhangayo zamasiko nezomlando, ngakho manje-ke livulekele izivakashi.
No kancane ezithakazelisayo izivakashi aquarium Chi Nguyen. Abantu bakule ndawo okuthiwa hhayi kuye kuphela, njengoba Palace Neptune sika. ukubukeka kwakhe kulesi sikhungo ubophekile ukuba umdobi wendawo ababengabendlu sibonakalise uthando olungenamkhawulo bemvelo. Wanquma ukudala siqu Museum yabo zasolwandle. Kuyaphawuleka ukuthi cishe yonke imali gone ukwakhiwa kanye ukuvulwa lesikhungo, baba wasungula indlela yakhe. echibini elikhulu ukuphila zasolwandle sidalwe abakhi. Okwamanje, izivakashi ezivela emazweni ahlukahlukene uvakashele aquarium ukubona imiphumela iminyaka eminingi emsebenzini indoda emangalisayo, owanikela iphupho lakhe iminyaka eminingi.
Labo izivakashi abahlela ukuchitha iholide lakho elilandelayo ogwini Vietnam, Ngingaluleka ukuya paradise island ngokuthi Hon Tam. Ihhotela Merperle Hon Tam kuyona 5 * (Nha Trang), etholakala ogwini yayo, iyindawo ephelele eziphumulele iholidi umndeni. Beautiful kwenkundla nomhlophe amabhishi kuyobenza babe abathandi esekusithekeni ngasolwandle zokungcebeleka. Kodwa abalandeli asebenzayo ekuphileni ebusuku, mhlawumbe, ukuze uthole enye indawo ogwini Nha Trang, lapho eyisimanga ukuphila okumatasa.
National Park Altyn-Emel. Umhlangano omkhulu kunayo yonke Nature Reserve e Kazakhstan